Mateu 27 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Mashoko Akanaka Akanyorwa naMateu 27:1-66
Jesu anoendeswa kuna Pirato (1, 2)
Judhasi anozvisungirira (3-10)
Jesu ari pamberi paPirato (11-26)
Anozvidzwa pamberi pevanhu (27-31)
Anorovererwa padanda paGorogota (32-44)
Kufa kwaJesu (45-56)
Kuvigwa kwaJesu (57-61)
Guva rake rinonyatsochengetedzwa (62-66)
27 Ava mangwanani, vatungamiriri vevapristi vese nevakuru vevanhu vakarangana pamusoro paJesu kuti vamuuraye.+ 2 Vakamusunga, vakaenda naye, vakamuisa mumaoko aPirato.+ 3 Judhasi, mutengesi wake, paakaona kuti Jesu akanga atongerwa rufu, akazvidemba, akadzokera nemasirivha aya 30 kuvatungamiriri vevapristi nevakuru,+ 4 akati: “Ndakatadza pandakatengesa ropa risina mhosva.” Ivo vakati: “Izvozvo zvinei nesu? Ndezvako wega izvo!” 5 Saka akakanda masirivha acho mutemberi, akabuda. Akabva aenda, akanozvisungirira.+ 6 Asi vatungamiriri vevapristi vakatora masirivha acho, vakati: “Hazvibvumirwi nemutemo kuaisa munochengeterwa pfuma yenzvimbo tsvene, nekuti iwo mutengo weropa.” 7 Vakataurirana vakabvumirana, ndokushandisa mari yacho kutenga munda wemuumbi kuti vaushandise senzvimbo yekuviga vanhu vanobva kune dzimwe nyika. 8 Saka nanhasi munda iwoyo unonzi Munda Weropa.+ 9 Zvakataurwa nekumuprofita Jeremiya zvakabva zvazadziswa zvekuti: “Uye vakatora masirivha 30, mutengo wainzi ndewemunhu, mutengo wakaiswa nevamwe vanakomana vaIsraeri, 10 vakatenga nawo munda wemuumbi, maererano nezvandakanga ndarayirwa naJehovha.”*+ 11 Iye zvino Jesu akanga amira pamberi pagavhuna, uye gavhuna wacho akamubvunza kuti: “Ndiwe Mambo wevaJudha here?” Jesu akapindura kuti: “Iwe ndiwe uri kuzvitaura.”+ 12 Asi paaipomerwa nevatungamiriri vevapristi nevakuru, haana kupindura.+ 13 Pirato akabva ati kwaari: “Hausi kunzwa here zvese zvavari kukupomera?” 14 Asi haana kumupindura kana shoko rimwe chete zvaro, zvekuti gavhuna wacho akashamisika kwazvo. 15 Pamutambo mumwe nemumwe, gavhuna aiwanzosunungurira vanhu musungwa wavaida.+ 16 Panguva iyoyo chaiyo vakanga vaine musungwa aiva nembiri yekuita zvakaipa ainzi Bharabhasi. 17 Saka pavakanga vakaungana, Pirato akati kwavari: “Ndeupi wamunoda kuti ndikusunungurirei, Bharabhasi kana kuti Jesu, anonzi Kristu?” 18 Nekuti Pirato aiziva kuti godo ndiro rakanga raita kuti vamuunze kwaari. 19 Zvakare, paakanga agere pachigaro chekutonga, mudzimai wake akatumira shoko achiti: “Siyana nemunhu iyeye akarurama, nekuti ndatambura chaizvo kuhope pamusana pake.” 20 Asi vatungamiriri vevapristi nevakuru vakanyengetedza vanhu kuti vakumbire Bharabhasi,+ voita kuti Jesu aurayiwe.+ 21 Gavhuna akabva ati kwavari: “Pavaviri ava ndeupi wamunoda kuti ndikusunungurirei?” Ivo vakati: “Bharabhasi.” 22 Pirato akati kwavari: “Saka, ndoitei naJesu uyu anonzi Kristu?” Vese vakati: “Ngaarovererwe!”+ 23 Iye akati: “Nemhosva yei? Akatadzei?” Asi vakatowedzera kushevedzera vachiti: “Ngaarovererwe!”+ 24 Achiona kuti zvakanga zvisiri kubatsira asi kuti zvaitomutsa mhirizhonga, Pirato akatora mvura, akageza maoko ake pamberi pevanhu vazhinji ivavo, achiti: “Handina mhosva yeropa remunhu uyu. Mhosva ndeyenyu.” 25 Vanhu vese vakabva vapindura vachiti: “Ropa rake ngariuye patiri nepavana vedu.”+ 26 Akabva avasunungurira Bharabhasi, asi akaita kuti Jesu arohwe netyava,+ akamuendesa kuti anorovererwa padanda.+ 27 Varwi vagavhuna vakabva vapinza Jesu mumuzinda wagavhuna, vakaunganidza uto rese rikamupoteredza.+ 28 Uye vakamubvisa zvipfeko zvaaiva nazvo, vakamupfekedza nguo tsvuku,+ 29 vakaruka korona yeminzwa vakaiisa mumusoro make uye vakaisa tsanga muruoko rwake rwerudyi. Uye vaipfugama pamberi pake vachimutsvinyira vachiti: “Kwaziwai, imi Mambo wevaJudha!” 30 Vakamusvipira mate,+ vakatora tsanga yacho, vakatanga kumurova mumusoro. 31 Pavakanga vamuseka, vakazomubvisa nguo yavainge vamupfekedza, vakamupfekedza nguo dzake dzekunze, vakaenda naye kuti anorovererwa.+ 32 Pavakanga vachibuda vakawana mumwe murume wekuKurini ainzi Simoni. Vakamanikidza murume uyu kuti atakure danda rake rekutambudzirwa.*+ 33 Uye pavakasvika panzvimbo yainzi Gorogota, zvinoreva kuti, Nzvimbo Yedehenya,+ 34 vakamupa waini yakasanganiswa nenduru kuti anwe;+ asi paakairavira, akaramba kuinwa. 35 Pavakanga vamuroverera, vakagova nguo dzake dzekunze vachiita zvekukanda mijenya,+ 36 uye vakagara ipapo vachimurinda. 37 Vakanyorawo chikwangwani chaiva nemhosva yaaipomerwa vakachiisa nechepamusoro pake. Chaiti: “Uyu ndiJesu Mambo wevaJudha.”+ 38 Makororo maviri akabva arovererwa pamwe chete naye, rimwe kurudyi rwake, rimwe kuruboshwe rwake.+ 39 Uye vanhu vaipfuura vaimunyomba,+ vachidzungudza misoro yavo,+ 40 vachiti: “Ndiweka wekuda kupaza temberi woivaka mumazuva matatu,+ chizviponesa! Kana uri mwanakomana waMwari, buruka padanda rekutambudzirwa!”*+ 41 Vatungamiriri vevapristi nevanyori nevakuru vakatanga kumusekawo vachiti:+ 42 “Akaponesa vamwe; iye haagoni kuzviponesa! Ndiye Mambo waIsraeri;+ ngaachiburuka padanda rekutambudzirwa,* tobva tatenda maari. 43 Aivimba naMwari; zvino ngaachimununura kana achimuda,+ nekuti akati, ‘Ndiri Mwanakomana waMwari.’”+ 44 Kunyange makororo akanga akarovererwa pamwe chete naye aimuzvidzawo.+ 45 Kubvira paawa yechi6,* nyika yese yakava nerima, kusvikira paawa yechi9.*+ 46 Panenge paawa yechi9, Jesu akashevedzera nenzwi guru, achiti: “Eri, Eri, rama sabhakitani?” zvinoreva kuti, “Mwari wangu, Mwari wangu, mandisiyirei?”+ 47 Vamwe vakanga vakamira ipapo pavakanzwa izvi vakatanga kuti: “Munhu uyu ari kushevedza Eriya.”+ 48 Mumwe wavo akabva amhanya, akatora siponji, akainyika muvhiniga, akaibayirira patsanga, akamupa kuti anwe.+ 49 Asi vamwe vese vakati: “Murege akadaro! Tiri kuda kuona kana Eriya akauya kuzomuponesa.” 50 Jesu akashevedzerazve nenzwi guru, akabudisa simba rake reupenyu.*+ 51 Uye keteni renzvimbo tsvene+ rakabva rabvaruka nepakati,+ kubva kumusoro kusvikira pasi,+ nyika ikadengenyeka, uye matombo akatsemuka. 52 Makuva* akavhurika, mitumbi mizhinji yevatsvene vakanga vakarara ikabuda 53 uye yakaonekwa nevanhu vazhinji (uye vanhu vakanga vachibva kumakuva* pashure pekumutswa kwake vakapinda muguta dzvene). 54 Asi mukuru weuto nevaya vaiva naye vachirinda Jesu pavakaona kudengenyeka kwenyika nezvinhu zvakanga zvichiitika, vakatya kwazvo, vakati: “Chokwadi uyu anga ari Mwanakomana waMwari.”+ 55 Uye vakadzi vakawanda vakanga vaperekedza Jesu vachibva kuGarireya kuti vazomushumira, vaitarisa zvaiitika vari nechekure zvishoma;+ 56 pakati pavo paiva naMariya Magadharini, uye Mariya amai vaJakobho naJosesi uye amai vevanakomana vaZebhedhi.+ 57 Zuva parakanga rava kunovira, mumwe murume wekuArimatiya akanga akapfuma ainzi Josefa, uyo akanga avawo mudzidzi waJesu, akauya.+ 58 Murume uyu akaenda kuna Pirato, akakumbira chitunha chaJesu.+ Pirato akabva arayira kuti achipiwe.+ 59 Josefa akatora chitunha chacho, akachiputira nejira rakanaka, rakachena,+ 60 akachiradzika muguva rake idzva,+ raakanga akachera padombo. Akasiya akungurutsira dombo guru pasuo reguva,* ndokuenda. 61 Asi Mariya Magadharini nemumwe Mariya vakaramba varipo, vakagara pamberi peguva.+ 62 Zuva rakatevera, pashure pezuva reKugadzirira,+ vatungamiriri vevapristi nevaFarisi vakaungana pamberi paPirato, 63 vakati: “Changamire, tinoyeuka kuti munyengeri uya paakanga achiri mupenyu akati, ‘Pashure pemazuva matatu ndichamutswa.’+ 64 Saka rayirai kuti guva racho richengetedzwe kusvikira pazuva rechitatu, kuti vadzidzi vake varege kuuya vakamuba+ voti kuvanhu, ‘Akamutswa kuvakafa!’ Unyengeri uhwu hwekupedzisira hungatozova hwakaipa kupfuura hwekutanga.” 65 Pirato akati kwavari: “Torai varindi, muende munorichengetedza sekuziva kwamunoita.” 66 Saka vakaenda, vakaita kuti guva racho richengetedzwe nekunama dombo racho uye nekuita kuti pave nevarindi.
^ Kana kuti “akabva afa.”
^ Kana kuti “Makuva evanoyeukwa.”
^ Kana kuti “kumakuva evanoyeukwa.”
^ Kana kuti “reguva rekuyeukwa.”